Kwa afọ, ndị isi na-ere ahịa na-aga n'ihu na-ebu amụma na na-agbanye usoro ha na-ahụ maka ndị ahịa ha. Nkwukọrịta PAN na-arụ nnukwu ọrụ mgbe niile ịnakọta ma kesaa ozi a - na afọ a ha etinyela ihe ọmụma na-esonụ, amụma amụma 2020 CMO, iji mee ka ọ dị mfe. Ọ bụ ezie na ndepụta nke ihe ịma aka na nka dị ka ihe na-adịghị agwụ agwụ, ekwenyere m n'ezie na a ga-eme ka ha sie ezigbo ike na nsogbu 3 dị iche iche: Ọrụ onwe onye
Ebe ọ bụ na ndị ahịa anyị bụ ọkaibe, ọ na-esiri anyị ike ịchọta ndị edemede nwere ike imepụta ihe na ihe ọmụma. Ka oge na-aga, ike gwụrụ anyị maka imegharị, dị ka ndị edemede anyị, yabụ anyị nwalere usoro ọhụrụ. Ugbu a, anyị nwere usoro mmepụta ebe anyị debere studio Podcast obere ebe - ma ọ bụ anyị kpọọ ha n'ime - anyị dekọkwa pọdkastị ole na ole. Anyị na-edekọ ajụjụ ọnụ na vidiyo.
Otu ebe m na-etinyeghị ego na ntinye aha ya bụ saịtị a. Ezie na m gị n'ụlọnga nwere oké logo na m hụrụ n'anya, na anyị na-arụ ọrụ niile nke ndị ahịa anyị na ha mbọn, M nnọọ enweghị bandwit na-arụ ọrụ na Martech Zone ika… ruo taa. Ihe ochie "M" bụ isi ihe atụ gbanwere ntakịrị nke m zụtara na ngwa ngwa mgbe m gbanwere ngalaba ahụ. Ọ bụ ihe doro anya, ọ naghị anọchite anya ihe ọ bụla, na
Na Indianapolis, enwere ije na oghere teknụzụ ahịa na ọnụ ọgụgụ na-eto eto nke ntinye ego nke HighAlpha - nke amụrụ site na ExactTarget. Anyị akọrọla banyere otu n'ime ụlọ ọrụ ndị ahụ, Quantifi, ma gbaa ajụjụ ọnụ CEO RJ Talyor na usoro ajụjụ ọnụ Martech anyị. Izu a, ọkachamara Liz Prugh nke Fure Fandom dị ọcha na RJ kpebiri ịjụ m ajụjụ maka pọdkastị ha, Ihe Ọhụrụ! Ozi nke Ihe Ọhụrụ Ọhụrụ: Nke anyị
N'agbanyeghị ahịa ndị ahịa, Marketingzụ ahịa bụ Ọrụ siri ike
Agencylọ ọrụ ọzọ nọ anyị n'olu n'ọhịa gara n'okpuru ọnwa a. O nwere njirimara niile nke nnukwu ụlọ ọrụ - onye ndu nwere ọgụgụ isi, otu ndị otu ọrụ raara onwe ha nye ụwa, ebe mara mma na ime obodo, yana impeccable branding online with a premiere publication. Ha egosiputa usoro nke di n'ime nke gha agha ma nweta ahia ma nyefee ndi ahia ha ahia. Ma ọ ka n'okpuru. Agencylọ ọrụ anyị, DK New Media, anọwo na nke a maka 7
An infographic na bụla Reason Ị Mkpa Focus na Mobile
Anyị nọrọ nnọọ ole na ole ji na Edge nke Web Radio kọọrọ anyị na-ege ntị na mkpa nke mobile. Anyị na-ekwukarị okwu banyere ire ahịa ekwentị mana ka m nọ ọdụ n’ọdụ ahụ na-atụle ihe nkiri ahụ na Erin Sparks nke Strategics Site, ọ malitere ime ka m mata etu omume mkpanaka dị egwu na-agbanwe dabere na ndụ m. Tonight m dere ezigbo enyi m na-eme mkpesa na ya